I-ANC nesivumelwano sobuholi esizogwema ukuhlukana phakathi | isiZulu
Ngibize uZuma ‘ngomkhovu' ngoba ngicasukile – Umsakazi
Mike Cohen, Amogelang Mbatha noSam Mkokeli, Bloomberg
Cape Town – Izikhulu eziphezulu ze-African National Congress (ANC) zizama ukuphusha iqembu ukuthi lifinyelele esivumelwaneni mayelana nokuthi ubani ozothatha izintambo kuMengameli Jacob Zuma njengomholi walo ngoDisemba, ukugwema ukuhlubuka kwamanye amalungu nokungaholela ekutheni lilahlekelwe amandla.
Ukungaboni ngaso linye phakathi kwabalandeli babaholi ababili abathathwa njengaphambili embangweni wesikhundla sobumengameli, uSekela Mengameli uCyril Ramaphosa kanye noNkosazana Dlamini-Zuma, owayengunkosikazi kaMengameli, kungase kuholele ekutheni abalandeli bomholi ozohlulwa okhethweni balaxaze iqembu njengoba kwenzeka eminyekeni eyishumi ngaphambilini ngesikhathi uZuma ehlula uThabo Mbeki kwesokuba nguMengameli weqembu.
Amalungu eqembu ahlubuka abe esesungula iCongress of the People, neyagcina ithole u-7% wamavoti okhethweni lwango-2009, kwathi ngemuva kweminyaka emithathu, kwasungulwa i-Economic Freedom Fighters, nokuyiqembu lesithathu ngobukhulu – nalo elasungulwa ngabaholi abahlubuka ku-ANC.
OLUNYE UDABA: Ufakwe amasondo umsakazi obize uMengameli Zuma ‘ngomkhovu’
“Sikhathazekile ngokwehla kancane kancane kwe-ANC futhi sikholwa ukuthi ngokubumbana sizokwazi ukusimisa leso simo,” kusho uSihle Zikalala, uSihlalo we-ANC esifundazweni iKwaZulu-Natal, ngesikhathi enengxoxo lapho kuqhubeka khona ingqungquthela ye-ANC eGoli.
“Uma kunemibono eqinile ngoNkosazana kanye noCyril, kumele sithole indlela yokuqinisekisa ukuthi wonke ama-comrades analeyo mibono ayabhekeleleka.”
Kodwa-ke umhlaziyi wezepolitiki e-University of Pretoria’s Centre of Governance Innovation, uMpumelelo Mkhabela, uthi noma ngabe i-ANC iyavuma ukufaka uRamaphosa kanye noDlamini-Zuma ezinhlakeni zayo eziphezulu, kodwa mancane amathuba okuthi omunye wabo avume ukuthatha indawo yesibili.
“Ayikho indlela yokuba nohlangothi olulodwa,” usho kanjalo engxoxweni lapho kuqhubeka khona ingqungquthela.
“Izinto ezihlukanisa lezi zinhlangothi zinkulu kakhulu.”
Izakhamuzi zaseNorth West zizokwazi maduze ngekusasa likaMahumapelo
Izakhamuzi zaseMahikeng, eNorth West, kuzohlukana usuku lwanamhlanje sezazi ngekusasa likaSupra Mahumapelo ekutheni uzoqhubeka yini nokuba ngundunankulu walesiya sifundazwe.
Kudutshulwe kwabulawa ona-16 eKapa
Kubulawe ingane eneminyaka engu-16 ubudala eMitchells Plain izolo ebusuku.
Maningi amathuba okuthi limgojele icala uDuduzane Zuma - Izazi zomthetho
INational Prosecution Authority (NPA) iveze ukuthi izoqhubeka nokushushisa uDuduzane Zuma kulandela ukuthi ehlulekile ukuhlangabezana nomnqamulajuqu wezinyanga ezimbili abebekelwe wona.